China Plush Fantasy Popular Pink Plain Sady Mahazendana sisintany mafana Shawl Scarf Vehivavy orinasa sy ny mpamatsy | Gusta
ba nataony Hat
Plush Fantasy Popular Pink Plain Sady Mahazendana Sisintany Ther ...
Custom Color mpampahory Shinoa Winter mafana Macaron H ...
Plush Fantasy Popular Pink Plain Sady Mahazendana sisintany mafana Shawl Scarf Vehivavy
Style ny Length:
ba nataony Jacquard
Ekeo ny Logo Customer
500000 Piece / Pieces isam-bolana
Quantity (Pieces) 1 - 360 > 360
Est. Time (andro) 35 To be Nifampiraharaha
fonosana 1 PC / OPP, 100PCS / CTN
Pattern & Color Ekeo Customization
Screen landy Pirinty natao tamin'ny / Heat Transfer Pirinty natao tamin'ny / Digital Pirinty natao tamin'ny / Full Color Pirinty natao tamin'ny /
Off-napetraka Pirinty natao
Service Manaiky OEM & ODM
Ora nanomezana 45-60 andro
1. Inona no karazana fandoavam-bola dia afaka manaiky?
Manaiky isika T / T na ny L / C amin'ny fahitana fandoavam-bola.
2. Afaka manome ny levitra talohan'ny nametraka ny fividianana mba anao?
Miala tsiny aho, Tsy manaiky ny levitra, indroa ilaina ny santionany dia ilaina .And dia hiverina aminao mandimby anareo mba voalohany.
3. eto misy loko samy hafa ny amin'ny tena santionany sy ny sary?
Sary rehetra dia nalaina avy amin'ny tena santionany, satria ny tontolo iainana, ny loko Monitor solosaina hafa, dia mety ho kely samy hafa loko. Isika mankasitraka ny fahalalana azy io.
4. Nahoana ny entana ho avy tahiry?
Dia hanao izay fara herintsika mba famokarana rehetra amin'ny tahiry. Fa ny sasany dia mafana ny fivarotana hamidy amin'ny fotoana fohy, ka mila fotoana mba hanomanana azy ireo indray. Koa dia hanary ny stale sady hamoaka ny mamy vanim-potoana rehetra, ny sasany dia handray fomba mivoaka avy any amin'ny tranonkala ihany koa.
5. Inona no mba kely dia kely dia be ny vidiny ambongadiny? Ny Mix kely dia kely mba be dia 100pcs amin'ny teti-dratsy isan-karazany.
6. Ahoana no hahatonga ny entana?
Afaka mandamina ny EXPRESS na FORWARDER ho anao. Saran'ny fanaterana tsirairay dia teny aminareo, dieny mbola fandaharana.
7. Mandra-pahoviana no afaka mahazo ny fananany? Raha toa ny fananana ao amin'ny tahiry, dia an-tsambo izy ireo aminareo ao anatin'ny tsy 3days.If amin'ny tahiry, mila 15-20days mba hanomanana azy ireo. Fa EXPRESS: 3-5 andro ny tananao rehefa mandefa, fa FORWARDER: 30 andro ny tananao rehefa mandefa.
8. Ahoana no atao raha tsy ataoko toy ny folara rehefa nandray ny fehy?
Pls jereo ny fehy ao anatin'ny 7days rehefa avy nandray sy ny tsy nampiasa fehy, tsara raha misy olana, dia manome anao tsy misy fepetra hifanakalo asa fanompoana, afa-tsy mifanaraka entana dia nandoa noho ny company.If ny mpanjifa milaza ny hatsaran'ny olana amin'ny 7days , ny entana dia tsy ho niverina. Tongasoa eto amin'ny hamangy ny orinasa sy ny orinasa!
Previous: Ladies Flower mafana Scarf 100% viscose Plain Scarf Shawl
Hijab Scarf Ary Shawls
Ladies Latest Leopard Print Zanak'ondry Volonondry Cash ...
Ambongadiny manokana Overs Winter Red Jacquard Lad ...
Custom Pattern Hand Made Big Koreana matevina Long ...
Tsara Cheap Pure Yellow Color Hood mafana CLA raiki-pitia ...
Pink Beautiful Indrindra môtô Modal Fashion Scarf
Custom tarehimarika Print Infinite Crinkle Crochet Scarf
Tsy mikiry amin'ny toetra ny vokatra sy ny fanaraha-maso hentitra ny mamokatra rafitra, nanao ny fanamboarana ny karazana rehetra.
Company fikambanana kilalao
Mamolavola Angletera amin'ny volon'ondry Cap
Mafana toetra Accessories folara